အစားအသောက်အမူအကျင့်ကို ပြောင်းလဲကြမယ် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
စားသောက်ပုံကို ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲလိုက်တာ ဥပမာအားဖြင့် ဂေါ်ဖီဟင်းချိုပဲ သောက်တော့တာမျိုးက ရေတိုမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကျဆင်းစေပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်သလို ရေရှည်အတွက်လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီတော့ စားသောက်ပုံကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲကြမလဲ။
● ကိုယ့်ရဲ့စားသောက်ပုံ အဆိုးအကောင်းအားလုံးကို သေချာပြန်လည်တွေးတောပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တာတွေ ဘာလို့စားမိနေရလဲဆိုတာ တွေးတောပါ။
● ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ စားသောက်ပုံတွေကို ပြောင်းလဲပါ။
● ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်ပုံတွေကို အလေ့အကျင့်လုပ်ပါ။
>> ကိုယ့်ရဲ့စားသောက်ပုံအဆိုးအကောင်းကို ပြန်လည်တွေးတောသုံးသပ်ပါ။
၁။ စားပုံသောက်ပုံကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။
ကိုယ်စားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရက်ပိုင်းလောက် စာရင်းပြုလုပ်ထားပါ။ စားတဲ့အစားအသောက်ရော၊ စားတဲ့အချိန်တွေကိုရောပေါ့။ ကိုယ် သတိမထားမိတဲ့အကျငိ့လေးတွေကို တွေ့လာရမှာပါ။ ဥပမာ - နေ့လယ်ခင်း ပင်ပန်းလာချိန်မှာ အချိုတစ်ခုခုစားမိတာလိုမျိုးပေါ့။ ဒီလိုစားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း စိတ်ထဲက ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာပါ မှတ်ထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မဆာဘဲစားမိတဲ့အခါမျိုးပေါ့။
၂။ ပိုစားမိစေတတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကို မှတ်ထားပါ။
● တစ်နပ်စာကျော်စားခြင်း စတာတွေပါပဲ။
၃။ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ စားသောက်ပုံအမူအကျင့်တွေကို ပြန်လည်ကြည့်ပါ။
ဒီလိုအမူအကျင့်တွေ ဘာလို့ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ ကြည့်ပါ။ အရင်ဆုံး ဘယ်ကစပြင်မလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ။ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေတဲ့ အမူအကျင့်တွေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချီးကျူးပါ။ ဒီလိုချီးကျူးခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားတက်စေနိုင်ပါတယ်။
၄။ ဘာတွေက ကိုယ့်ကိုပိုစားမိစေသလဲဆိုတာ ရှာပါ။
မဆာဘဲ စားမိစေတတ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ရှာဖွေပါ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာရှိတတ်တဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေကို ဆန်းစစ်ပါ။
၅။ မဆာဘဲ စားမိစေတတ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ -
● ကြောင်အိမ်ဖွင့်ကြည့်မိတဲ့အခါ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစားအသောက်ကို တွေ့မြင်မိခြင်း
● အိမ်မှာ တီဗီထိုင်ကြည့်မိနေခြင်း
● အိမ်မှာ၊ အလုပ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း
● အိမ်မှာ ညစာ ဘာချက်ထားမှန်းမသိဘဲ ပြန်လာမိခြင်း
● ကိုယ့်အတွက် သီးသန့်ညစာ ချက်ထားပေးခြင်း
● ထမင်းစားကောင်တာပေါ်မှာ သကြားလုံးပန်းကန် တင်ထားမိခြင်း
● အစည်းအဝေးစားပွဲမှာ မုန့်ပန်းကန်တင်ထားခြင်း
● မနက်တိုင်း မုန့်ဆိုင်ဝင်ဝယ်မိနေခြင်း
၆။ နေ့တိုင်း၊ အပတ်တိုင်းဖြစ်နေတတ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ဝိုင်းလိုက်ပါ။
၇။ ဝိုင်းထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးပါ။
>> ဒီအခြေအနေကို ရှောင်ရှားနိုင်သလား?
ဥပမာအားဖြင့် ဆိုင်ဝင်ဝယ်လို့ရမယ့်လမ်းကို မရွေးဘဲ တခြားလမ်းကသွားတာမျိုး။ စားစရာတွေကို အလွယ်တကူမမြင်နိုင်တဲ့ နေရာမှာထားတာမျိုးပေါ့။
>> ရှောင်လို့မရခဲ့ရင် တခြားဘာနည်းလမ်းရှိသလဲ?
အစည်းအဝေးမှာ စားမိတာမျိုးဆို ရှောင်ရှားလို့မရဘူးလေ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စားစရာလေးတွေ ယူလာတာမျိုး၊ အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမမှီတဲ့နေရာမှာ ထိုင်တာမျိုး၊ အစည်းအဝေးမစခင် တစ်ခုခု အဆာပြေစားထားတာမျိုး လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
>> ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ စားသောက်ပုံတွေကို ပြောင်းလဲပါ။
၁။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်ပုံကို ပြောင်းလဲပါ။
ကိုယ့်ရဲ့စားပုံသောက်ပုံကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်းစားရင် အမြန်စားမိတယ်ဆိုပါတော့။ ဒါဆိုရင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အတူစားတာမျိုး လုပ်ကြည့်ပါ။ နောက်တစ်နည်းကတော့ စားနေတဲ့ အချိန်အတောအတွင်းမှာ ခက်ရင်းကို ချချထားတာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် စားနေတာကို အနည်းအကျဉ်းတော့ နှောင့်နှေးသွားစေမှာပါ။
၂။ ဖြည်းဖြည်းစားပါ။ အမြန်စားတဲ့အခါ ဗိုက်ပြည့်တာထက် ပန်းကန်ထဲပြောင်ဖို့ကိုသာ ဇောသန်တတ်ပါတယ်။
၃။ တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း မဆာဘဲ မစားပါနဲ့။ စိတ်ပူတိုင်း၊ ပျင်းတိုင်း မဆာဘဲ စားမိနေတယ်ဆိုရင် တခြားအကျင့်တစ်ခုခုကို မွေးကြည့်ပါ။ လမ်းလျှောက်တာတို့၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောတာတို့ပေါ့။
၄။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာတွေ စားမိဖို့ ကြိုတင်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပါ။
>> ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်ပုံတွေကို လုပ်ယူပါ။
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လုပ်ယူဖို့ လိုပါတယ်။ အလေ့အကျင့်ဆိုတာ အချိန်လိုပါတယ်။ နေ့ချင်းညချင်းတော့ ပြောင်းလဲလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အပြုအမူတစ်ခုခုတွေ့တိုင်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ငါ ဘာလို့လုပ်မိတာလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ လုပ်မိတာလဲ၊ ဘာအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ လိုသလဲ စသဖြင့် မေးမြန်းကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အားမလိုအားမရ ဒေါသထွက်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ အချိန်ယူပြီး ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။